Zvigadzirwa fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri uye vatengesi
Kuunganidza Conveyor Roller
Asina simba Roller
Kaviri Groove Conical Roller
Kwakakurudzira Tapered Roller
Rabha Coated Cone Kuendesa Roller
Stainless Simbi Cone Roller
Kutendeuka Conical Conveyor Roller
Yakakombama Belt Conveyor
Yepasi Belt Conveyor
Frey Wheel Nzira
Leveler Kune Conveyor
Stainless simbi koni chinotenderera
Rabha zvemapuranga cône irikupa chinotenderera
Grooved cône chinotenderera
Double paburi conical chinotenderera
Huzhou YUANTUO ikambani yeinjiniya inoongorora R & D, dhizaini uye kugadzira kwese kwese kutakura michina yekushandisa, michina yekuchengetedza uye zvikamu. Bhizinesi rinosanganisira dhizaini uye kugadzirwa kwemhando dzese dzemuchina mumwe chete uye zvikamu zvekusiya, kubatana uye kuunganidzwa kwemachina mazhinji, uye kuferefetwa kwemunda, kuronga uye kusimudzira kweinjiniya yesisitimu. Kugadzira zvinokwanisika uye zvakavimbika zvemishini michina ibasa redu ...
Zvimiro zvemukombe tsoka zvigadzirwa: 1. Chigadzirwa zvinhu: chigadzirwa chakagadzirwa nesarbon simbi, uye iyo yekurapa yekurapa ndeyesarudzo (zinc / nickel / chromium / blackening / pulse kupenda) kana 202/304 simbi isina simbi 2. Chigadzirwa size: chigadzirwa saizi. inogona kusarudzwa zvinoenderana nechimiro chemufananidzo 3. Makuriro ekushandisa: ino nhevedzano yezvigadzirwa inokodzera mhando dzese dzemuchina unorema, michina yekudya, zvekurapa, makabati, nezvimwewo 4. Zvakanakira chigadzirwa: chigadzirwa chine huwandu hwepamusoro hwekubata, c ...
Fulailun akateedzana zvigadzirwa zvidiki muhukuru uye huremu huremu, inokodzera kuendesa zvinhu nepasi pasi. Iyo inonyanya kushandiswa mukukotamisa chikamu cheiyo yekuburitsa system kana iyo chikamu chekutsausa uye kusangana, uye inogona zvakare kushandiswa semurindiri kana gwara pamativi ese eiri ekufambisa. Fulai pulley inoshandiswawo kune vanokanda, izvo zvinogona zvakare kutora chinzvimbo chekubatsira mune akawanda mafambisi, senge chikamu chinokwira chekukwira bhandi conveyor kudzvanya bhandi, nezvimwe. Mumusangano wegungano, Fulai vhiri iri w ...
Tsananguro yerabha yakafukidzwa roller barrel: Mushure mekugadzira roller, yezvinodiwa zve anti rust, anti-corrosion uye rutsigiro, inodawo kurapwa kwepamusoro kana kupfeka, senge kupenda, galvanizing, Teflon kupopera, kurira kwerabhora, chromium yakanamirwa pamoto, zvedongo kupurudzira uye oxidation. Zvinoenderana nesaizi yacho, pane yakakura-mikuru senge mapepa-ekugadzira michina roller (kureba kunogona kusvika anopfuura gumi metres, dhayamita inopfuura 1500 mm), pane zvidiki-zvidiki senge otomatiki gungano mutsara mutsara bhandi ...
Hunhu hwePVC roller 1. Roller conveyor (roller conveyor) inokodzera kuburitsa mhando dzese dzemabhokisi, mabhegi, mapallet, nezvimwe zvinhu zvakawanda, zvinhu zvidiki kana zvisina kujairika zvinhu zvinofanirwa kutakurwa Kutakura pamapallet kana mabhokisi ekudzoka. 2. Inogona kutakura imwe chete inorema zvinhu kana kutakura yakakura kukanganisa mutoro. 3. Chimiro chakasiyana. Mutsetse wetsiva unogona kukamurwa musimba renzira yemutsara uye isiri simba renzira nzira maererano nemotokari nzira, uye inogona kukamurwa kuita yakatwasuka conveyi ...
Zvinhu zvenaironi chinotenderera
Kaviri cheni roller, akasiyana, sarudzo, inogona kuve inoenderana maererano nezvinodiwa nevatengi. Inoshandiswa zvakanyanya. Roller kudhinda, sekudhinda kwepepanhau, inzira-yekumhanyisa maitiro inogona kuburitsa anopfuura 6000 mayadhi emachira akadhindwa paawa. Iyi nzira inonziwo michina yekudhinda. Mukudhinda chinotenderera, mapatani anodhindwa pamucheka nekunyora engururu emhangura (kana rollers). Dhiramu yemhangura inogona kuvezwa kubva pamitsara yakanyatsorongedzwa, iyo inogona kudhindwa yakadzama kwazvo, yakapfava p ...
Simba risina simba
Iyo roller roller ndeye yakakomberedza roll chikamu iyo inotyaira iyo conveyor bhandi kana inoshandura yayo inomhanya mafambiro. Inogona kuganhurwa mumhando mbiri: dhiraivha roller uye gozvo roller. Dhiraivha roller ndicho chinhu chikuru chekuchinjisa simba. Simba rekutyaira rinotenderera rakakamurwa kuita rimwe chete roller roller (kona yekuputira bhandi kune iro roller roller iri pazasi pe200 ° kusvika 230 °), magetsi emagetsi akawanda (anowanzo shandiswa kwesimba simba) uye maviri emagetsi roller (yekumonera kona iri kumusoro 350 °). Anodei ...
Kutenderera roller zvigadzirwa zvigadzirwa Chigadzirwa Tsananguro: inokodzera kuendesa ese marudzi emabhokisi, mabhegi, mapallet, nezvimwe zvinhu zvakawanda, zvinyorwa zvidiki kana zvisirizvo zvinyorwa zvinofanirwa kutakurwa pamapallet kana mabhokisi ekudzoka. Inogona kutakura imwe chete inorema zvinhu kana kutakura yakakura kukanganisa mutoro. Structure: maererano nemota yekutyaira, inogona kuve yakakamurwa kuita simba roller roller uye isina simba roller roller, zvinoenderana marongero, inogona kukamurwa kuita yakatwasuka irikuendesa roller mutsara, inoteedzera ...
Kugadzirwa kwekwere roller kunowanzo kuve neyekutanga kutendeuka kwemutumbi we roller, yekutanga static balancing, kupindira kwakakodzera uye kutenderera kweiyo shaft musoro, kutendeuka kwakanaka uye kwakanaka simba kuenzanisa. Kana hunhu kushivirira, senge kutenderera, kutenderera uye kutwasuka, kunodiwa kuti kuve pasi pe0.2mm, iyo yekumusoro yekumusoro yekukanda kana yekugurisa inodiwa kuti igaye mushure mekupedza. Kana kuomarara kwepasi kuchidikanwa, maitiro ekupisa ekupisa anofanirwa kuwedzerwa. Mushure mekunge roller iri ...
Isina simbi simba roller roller uye dhiramu yekutendeuka muchina ine zvakanakira chimiro chakareruka, kuvimbika kwakanyanya uye nyore kugadzirisa. Aya mabasa anogona kukuunzira makuru ebhizinesi mabhenefiti, kuti unzwisise basa rayo chairo. Roller tambo inoshandiswa kuitira nyore kubatana uye kusefa pakati pevanotakura. Inogona kuumba yakaoma logistics yekufambisa system ine akawanda roller mitsara uye zvimwe zvinopa zvigadzirwa kana akakosha michina kusangana akasiyana maitiro maitiro. Iyo inovhara ro ...
Iyo yekushandisa modhi inoenderana neyepurasitiki roller, iyo inosanganisira humburumbira, yekupedzisira butiro, roller roller, ruzha kubvisa uye kupisa kupisa mudziyo uye iyo isina magetsi inobvisa mudziyo. Iyo roller shaft iri cylindrical, iyo cylinder ine mhango cylindrical, iyo cylinder yakaputirwa kune yekunze divi rer roller shaft, magumo ekuvhara akarongedzwa kumagumo ese esirinda, zvimiro zvemukati zvemagumo zvinofukidza pamativi ese ari maviri zvinopindirana, mabheyaringi akaiswa mukati mekutakura ...
Iko kusimudzira kutungamira kwekutakura mu ...
Zvinokonzera uye matanho ekudzivirira ebhandi co ...
Kushanda musimboti webhandi rinotakura
Chikamu 227, kuvaka 1, 656 Qixing Road, Wuxing Dunhu, Huzhou Guta, Zhejiang Province, China
Tidaidze Iye Zvino: 0086-13325920830